मुकेश अम्बानीले उछिने चिनियाँ अर्बपति झोङ सानसानलाई, कती छ उनको सम्पति ? – ramechhapkhabar.com
मुकेश अम्बानीले उछिने चिनियाँ अर्बपति झोङ सानसानलाई, कती छ उनको सम्पति ?
केही समयअघि रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीलाई उछिनेका चिनियाँ धनाढ्य झोङ सानसानलाई अम्बानीले निकै पछाडि पारिदिएका छन्।
काठमाडौं। केही समयअघि रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीलाई उछिनेका चिनियाँ धनाढ्य झोङ सानसानलाई अम्बानीले निकै पछाडि पारिदिएका छन्। रियल टाइम बिलिनियरको नयाँ सूचीमा सानसान १७ नम्बरमा छन् भने मुकेश १० नम्बरमा। अहिले चीनमा सबैभन्दा धनी मा हुतेङ बनेका छन्।
सय अर्ब क्लबमा अहिले अमेजनका जेफ बेजोस, टेस्लाका एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नाट एन्ड कम्पनी, बिल गेट्स र मार्क जुकरबर्ग यसमा अटेका छन्।
३ वर्षमा दोब्बर बन्यो मोबाइल फोन आयात
तीन वर्षमा मोबाइल फोन आयात दोब्बर पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को फागुन मसान्तसम्म मोबाइल फोनको आयात दोब्बर पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनमा १२ अर्ब ६३ करोड ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिमा १४ अर्ब ३७ करोड ३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन आएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म २६ अर्ब ३० करोड ५४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन भित्रिएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सोही अवधिको तुलनामा १३ अर्ब ६७ करो ड ४३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बढी हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा ११ अर्ब ९३ करोड ५० लाख ९८ हजार रुपैयाँले धेरै भएको विभागको तथ्यांक छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।